Iindaba zenkampani | Ezezimali (Ekhasi 2)
Zithini izilumkiso zenzuzo?
Oko kubizwa ngokuba sisilumkiso senzuzo ngaphezulu kwako konke isilumkiso malunga neenzuzo? malunga nenkampani edweliswe kwiimarike zezabelo. Oko kubizwa ngokuba sisilumkiso senzuzo ngaphezulu kwako konke isilumkiso malunga neenzuzo? malunga nenkampani edweliswe kwiimarike zezabelo
Yintoni umbutho osemthethweni?
Ewe igama leziko elisemthethweni liphulaphulwa ngokubanzi yinxalenye elungileyo yabemi, nangona beyazi kakuhle intsingiselo yayo. Umntu osemthethweni unentsomi okwaziyo ukusebenzisa amalungelo kunye nokufumana uxanduva lokwenza kwimisebenzi eyahlukeneyo
Amanqaku eShishini: tyala imali ngakumbi
Amanqaku eshishini okanye eenkampani yimveliso yotyalo-mali ethile ngendlela yokuba ingadweliswanga kwiimarike zezemali. De Iphepha lezentengiso leenkampani okanye iinkampani ziyimveliso yotyalo-mali ngandlel 'ithile ngendlela yokuba ingadweliswanga kwiimarike zezemali.
Yonke into ofuna ukuyifumana malunga nomyinge wobungakanani
Izixhobo ezisebenzayo ezikhoyo kwicandelo lezemali ukuqinisekisa ukusinda kwenkampani, kwaye ukukhula kwayo kukulingana kwemali
UNadir uza kuyeka ukucebisa ukuba sinike ingqwalaselo eyodwa kulawulo lweTyala, ulwazi olubalulekileyo
Ibhondi ingaphezulu kwayo yonke into enamandla emali yamatyala esetyenziswa ngamashishini abucala naworhulumente
Iselfowuni ngakumbi sele ithengisa kwinqanaba lama-euro angama-100
IMás Móvil yenye yezona zixabiso lishushu kwii-equity zaseSpain kwaye ifikelele kwi-100 ye-euro ngesabelo ngasinye
Iindaba zokungabinamali zokudlala zijolise kulwazi lwezoqoqosho kule veki. Kodwa uyazi ukuba kwenzeka ntoni?
Ubugwenxa obuphantsi, ngelixa amanyathelo ephunyezwa kuthintelo lwayo
Inqanaba lobuqhetseba beenkampani lehle kakhulu, ukongeza ekungeniseni amanyathelo amatsha okuthintela esi sehlo
Inethiwekhi yangaphakathi yeTelefonica, i-BBVA kunye ne-Santander iyawa ngenxa yokuhlaselwa kwe-cyber
Uhlaselo lwe-cyber kuthungelwano lwangaphakathi lweTelefonica, i-BBVA, iSantander kunye nezinye iinkampani ezinkulu.
I-Repsol Foundation ye-Fund ye-Fund Campaign 2017
I-Fundación Repsol 2017 i-Campaign ye-Entrepreneurs Campaign, i-accelerator yeshishini enika inkxaso kwi-startups esebenza kwicandelo lamandla
Uyenza njani into yelungelo lomenzi okanye uphawu
Ukuba nelungelo elilodwa lomenzi wengcinga yakho, unokufumana ilungelo elikhethekileyo kuyo, ukuze ube nelungelo elilodwa lomenzi wechiza ngombono kufuneka ulungiselele amaxwebhu aliqela
Uyenza njani ingxelo yemali?
Ingxelo yezemali kukudityaniswa kolwazi apho umhlalutyi, ngokusebenzisa amagqabantshintshi, iinkcazo, iingcebiso
Naturhouse, inkwenkwezi yentengiso yesitokhwe ngoSeptemba
I-Naturhouse kolunye ukhuseleko olutsala umdla wabatyali mali ngeli xesha, uyafuna ukwazi izizathu?
Yonke into ofuna ukuyifumana malunga ne-Invoice yeProforma
I-invoice ye-proforma luhlobo loyilo lwe-invoyisi eqhelekileyo, kodwa ngaphandle kwexabiso lencwadi, kuba luxwebhu lwangaphambili
Oyena mvelisi weoyile mkhulu
Ioyile yomnquma yigolide yeMeditera, iyinxalenye yokutya kwethu kwemihla ngemihla, kwaye asimithi nasiphi na isidlo ngaphandle kweoyile ye-olive.
Umrhumo wokuziqhelanisa nentloko yabaninzi: ukuyiqonda, ukuyamkela, ukuyihlawula nokuyifumanisa, kwaye zininzi izinto ezahlukeneyo
Sele sivile malunga nokuqhekeka kunye nokuvalwa kweenkampani okanye amashishini, kodwa yintoni eyonqabileyo okanye evaliweyo?
I-Factoring ngumsebenzi wentengiso onokuba luncedo kakhulu ukuba uneshishini elincinci. Ngaba uyazi ukuba zeziphi izizathu?
Iinkampani ezili-10 ezilungileyo zokusebenzela eSpain
Sifuna ukubalasela, kwaye sifuna ukusebenza ngeyona nto intle, akukho mathandabuzo ngaloo nto. Ayinamsebenzi ukuba sizinzululwazi, ...
Ukunyuswa kwenkunzi kubandakanya ukubonelela ngexabiso elikhulu kunye neeasethi kwinkampani, iindlela ezahlukeneyo zokwenza kunye nezibonelelo esiza kubona ngezantsi.
I-Factoring yindlela yokusebenza kwemali eyinkunzi ejolise kwiinkampani ezincinci neziphakathi. Fumanisa iintlobo, izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga.
Isoftware ye-ERP yenkampani yethu, umncedisi obalulekileyo
Isoftware ibaluleke kakhulu kwinkampani, ke kuya kufuneka ukhethe eyona ilungileyo njengeSage ERP X3 Enterprise
IAmazon ithathe isigqibo sokwahluka, kweli nqaku sichaza ukuba yintoni iyantlukwano kwaye loluphi uhlobo lweAmazon olukhethileyo.
Iinkampani zamanye amazwe eSpain zinethemba loqoqosho lwelizwe
Iinkampani zamanye amazwe ezisebenza eSpain zinethemba kakhulu ngoqoqosho lwelizwe lowama-2014 nowama-2015
Sikunika uluhlu lweenkampani ezilishumi ezilawula ukusetyenziswa kwemihla ngemihla kwihlabathi kunye neempawu eziqulathe zona
Umbutho weProjekthi yeCarbon Disclosure uvelise uluhlu lweenkampani ezilishumi ezingcolisa umhlaba